Air New Zealand waxay furaysaa waddo cusub oo Chicago-Auckland ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air New Zealand waxay furaysaa waddo cusub oo Chicago-Auckland ah
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Jebinta Wararka Mareykanka • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Duulimaadkii ugu horreeyay ee shirkadda Air New Zealand ee u dhaxeysa Auckland iyo Chicago ayaa galabta ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee O'Hare.
Duulimaadka NZ26 wuxuu ka amba baxay 5:01 PM waqtiga maxaliga ah ee Auckland wuxuuna ka degay Chicago markay ahayd 12:11 PM waqtiga maxaliga ah ee Chicago. Waqtiga duulimaadka ee ku dhowaad 15 saac woqooyi iyo in ka yar 16 saac koonfur, duulimaadku waa midka ugu dheer ee Air New Zealand, oo la wareegaya Auckland-Houston oo leh duulimaad 13.5 saacadood ah.
Madaxa Fulinta ee Air New Zealand Christopher Luxon, oo ku safray duulimaadkii ugu horreeyay, ayaa sheegay in adeegga cusub ee shirkadda ee Auckland-Chicago uu macnaheedu yahay fursado cusub oo xiiso leh oo loogu talagalay dadka safarka ah si ay u sahamiyaan magaalada saddexaad ee ugu weyn Mareykanka, iyo inbadan oo ka mid ah Xeebaha Bariga Mareykanka iyo Kanada.
Waxaan ku faraxsanahay inaan u fidinno macaamiisheenna xiriir toos ah oo u dhexeeya New Zealand iyo Chicago. Iyadoo lala kaashanayo saaxiibkeen isbahaysiga United oo ka hawlgala duulimaadyo badan xarunteeda garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee O'Hare marka loo eego duulimaadyada kale, adeegga cusub ee Chicago wuxuu macaamiisha siinayaa isku xirnaan hal-joogsi oo koodhadh hal-joogsi leh oo ku dhow 100 meelood oo ku kala yaal Mareykanka.
“New Zealand waxay horey u soo dhaweysaa ku dhowaad 340,000 oo booqasho sanadle ah kana yimaada Mareykanka waxaana rajeyneynaa in tiradan ay ku kori doonto markii la hirgaliyo adeegan cusub Waxaan rajeyneynaa in wadadaasi ay wax ku biirin doonto NZD $ 70 milyan sanadkii si dhaqaalaheena ah - waana ognahay in boqolkiiba 50 kharashaadka ay soo booqdayaashu ay ku bixiyaan meel ka baxsan xarumaha waaweyn, ”ayuu yiri Mr. Luxon.
Chicago waa meel xiiso leh oo ay ku yaalliin 55 milyan oo qof oo booqasho ku yimaada sanad walba. Soojiidashada ugu waaweyn waxaa ka mid ah: Taariikhda xiisaha leh ee Chicago, matxafyo heer caalami ah iyo qaab dhismeed qurux badan; jazz-ka iyo buluugga caalamiga ah ee caanka ah, iyo makhaayadaha abaalmarinta ku guuleystay iyo suxuunta cuntada, oo ay ku jiraan biisaska caanka ah ee qotada dheer leh.
Jamie L. Rhee, Wakiilka Waaxda Duulista Hawada ee Chicago wuxuu sheegay in Magaalada Chicago ay ku faaneyso la shaqeynta Air New Zealand si ay u soo dhaweyso adeeg cusub oo Auckland uga imanaya O'Hare International Airport.
Maaddaama ay tahay xarunta ugu wanaagsan ee ku xiran Mareykanka, ku darista adeegga cusub Auckland waxay sare u qaadeysaa isku xirnaanta adduunka ee Chicago ee sii kordheysa, iyo sidoo kale xulashada socdaalka, iyadoo ka dhigeysa Chicago mid ka mid ah magaalooyin fara ku tiris ah oo leh adeegyo hawo toos ah lixda gobol ee waaweyn ee adduunka. . Waxaan rabnaa inaan ugu mahadnaqno Air New Zealand sida ay uga go'an tahay Chicago. Wadadan cusub ayaa la filayaa inay ka soo saarto $ 75 milyan sanadkii saamaynta dhaqaale ee aagga Chicago, waxayna u abuureysaa shaqooyin iyo fursad cusub kuwa ugu yeedha guriga Chicago, ”ayuu yidhi Mr. Rhee.
Air Auckland adeegga tooska ah ee Auckland-Chicago, oo ay maamusho diyaaradeeda Boeing 787-9 Dreamliner, ayaa ka bixi doonta Auckland Arbacada, Jimcaha iyo Axada sida soo socota:
Duullimaadka No. ee ay ku shaqeyso nooca duulimaadku wuxuu tagayaa Taariikhaha wax ku oolka ah Joogtaynta
16:15 2 Dec 2018 - Aragtiyood
8 Mar 2019 Arbaco, Jimco, Axad
17:15 10 Mar 2019 - 29 Mar 2019 Arbaco, Jimco, Axad
30 Nofembar 2018 -
10 Mar 2019 - 29 Mar 2019 Arbaco, Jimco, Axad